मङ्गलबार, ०५ कार्तिक २०७६, १८ : ०७
मान्छेसँगै पैसा कमाउने कफीको मेलो
हरि जंग थापा
सपनाको भारी बोकेर वर्षेनी लाखौं युवा शहर छिर्छन् । एसएलसी दिने बित्तिकै यसरी नै शहर छिरेका थिए, रामेछाप फुलासीका दुर्गा श्रेष्ठ र अर्जुन चौहान । ठ्याक्कै यस्तो बन्छु भन्ने त थिएन । तर मनमा थियो पढ्ने, पैसा कमाउने र जिन्दगीको गाडिलाई सुखको बाटोमा दौडाउने चाहना ।
यस्तै चाहना प्राप्तिका लागि दुनियाँको चाकरी गर्दैमा समय बित्छ । सुखी जीवनका लागि देखेको सपना पुरा गर्न नसोचेको संघर्ष गर्नुपर्छ । संघर्षले व्यस्तता र व्यस्तताले मानिसलाई मेशिनजस्तै बनाउँछ । मेशिनजस्तै जागिरे जिन्दगीबाट थोरै फुर्सद मिल्ने बित्तिकै दुर्गा घुमफिरमा निस्कन्थे ।
घुम्दै वसन्तपुर पुग्दा वि.सं २०७० भदौ २४ गतेको दिन दुर्गाले सँगै पढेका साथी अर्जुनलाई भेटे । आफ्ना आवश्यकता र सपना पुरा गर्न शहर छिरेका दुई साथीको त्यो भेट नै जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो । त्यो भेटले नयाँ योजनाहरुको बिजारोपण गर्यो । साथ, सहयोग र सहकार्यको संकल्प भयो । अर्जुन त्यो क्षण सम्झन्छन्,‘शहर छिरेको साथी कहाँ हरायो पत्तो थिएन । सानोमा केही गर्नु पर्छ भन्थ्यो । रेष्टुरेण्टको म्यानेजर बनिसकेपछि संयोगले भेट भयो ।’
संघर्षका पहाड उक्लदैं दुर्गा पनि रेष्टुरेण्टको म्यानेजर बनिसकेका थिए । मासिक ३०–३५ हजार कामाउँथे । व्यवहार चलाउन गाह्रो थिएन । ‘कुन कफी खाने ? अर्जुनले सोध्दा म अलमलिएको थिएँ । ककटेल र मकटेल बनाउने मलाई कफीबारे ज्ञान थिएन । न त थाहा थियो यसका थरिथरीका अप्ठ्यारा नाम,’उनी अर्जुनसँगको त्यो भेट सम्झन्छन् । भेटमा अर्जुनले कफीको बयान गरे । दुर्गाले रेष्टुरेन्ट र कफी सपको भेद छुट्याए । कफीतर्फ नै पाईला अघि बढाउने अठोट गरे ।
रक्सी खाएर हल्ला गर्न मानिसहरु रेष्टुरेण्ट आउँथे । त्यस्ता ग्राहकले गर्ने लफडामा दुर्गा थुप्रै पटक परेका छन् । तर कफी सप बौद्धिक मान्छेको जमघटस्थलको रुपमा विकास हुँदै थियो । कफीबारे कक्षा लिँदै गर्दा उनले यी कुरालाई राम्रोसँग मनन गरे । त्यसैले कफीसँग उनको गाढा प्रेम बस्यो । यही प्रेमले दुर्गा र अर्जुनको सहयात्रामा हाइल्याण्ड विन्स एण्ड कफी सपको जन्म भयो । जसको स्वाद कफीका पारखीको पहिलो रोजाई बन्दै गएको छ ।
उनीहरु कफी पारखीलाई अनेक परिक्षण गरेर विविध स्वाद दिन चाहन्थे । तर, त्यो स्वतन्त्रता एउटा कामदारलाई थिएन । त्यसैले अर्जुनलाई आफ्नै कफी सप खोल्न मन थियो । आफ्नो मनको कुरा दुर्गासँग साटेपछि उनीहरु दुबैको लक्ष्य एउटै बनेको थियो । त्यही लक्ष्य प्राप्तिको सुरुवातस्वरुप दुईजना मिलेर भक्तपुरमा कफी खोले ।
‘उन्नति र प्रगतिको अभिन्न अंग हो, स्वतन्त्रता । स्वतन्त्र हुनकै लागि जानी बुझी सरकारी जागिरमा फेल भईदिन्थेँ । साथीहरुसँग उद्धेश्य मिलेपछि स्वतन्त्र भएर क्रियटिभीटीलाई प्रयोग गर्नका लागि कफी शप सुरु गर्यौं,’दुर्गा कफी सपको मालिक बन्नुको रहस्य खोले ।
उनका साथी अर्जुनले पनि दुखलाई राम्रोसँग बुझेका छन् । ‘म सँग कफीबारे लामो अनुभव थियो । अमेरिका गएर ब्राण्डिङ गर्ने तरिकाबारे अझै धेरै सिक्ने अवसर पाएँ । दुर्गाको आँट भरोसा मिलेपछि सपनालाई विपनामा परिणत गर्ने बाटोमा लागेका हौं,’ अर्जुन आफ्ना मनका कुरा बताउँछन् ।
अहिले गाडि चढेर हिँड्ने हैसियत बनाईसकेका अर्जुनले भुईं पुछ्नेदेखि काम सुरु गरेका थिए । साढे २ वर्षमै आउटलेट म्यानेजर बने । अबको योजनाबारे बताउँदै उनी भन्छन्,‘कामप्रतिको सम्मान, लगनशिलताले यो सफलता मिलेको हो । अझै सपनाहरु पुरा भईसकेका छैनन् । फिचर फिल्म बनाउने सोच हो बल्ल त म्युजिक भिडियो बनाउन दक्ष बन्यौ । अझै धेरै गर्न बाँकी छ ।’
नेपाली कफीलाई एउटा ब्राण्ड बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने उनीहरुको लक्ष्य छ । स्वदेशीलाई मात्र होइन विदेशीलाई पनि नेपाली कफीको पारखी बनाएर आफ्नो सपना पुरा गर्ने उनीहरुको चाहना छ । त्यो सफलताको जगलाई बलियो बनाउन उनीहरु कटिबद्ध छन् । गौशला, बत्तिसपुतली, पुल्चोक र लगनखेलमा हाइल्याण्ड विन्स विस्तार भईसकेको छ । भक्तपुरबाट कफी शप सुरु गरेका उनीहरु भन्छन्,‘हिजोका दिनमा २ सयको कफी पिउने भए त ठमेल जान्छौं भन्नेहरु अहिले हाइल्याण्ड विन्स खोज्दै आउनुहुन्छ । यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो ।’
केही समय अमेरिका बसेर आएका अर्जुन नेपालमा व्यापरका लागि अथाहा सम्भावना देख्छन् । उनी भन्छन्,‘नेपालमै चाहिँदो काम छ । सापटीको पैसाले बिजनेस गर्न सकिने देश नेपाल नै हो । खोलाको गंगटालाई पनि ब्राण्ड बनाएर बेच्न सके मालामाल भईन्छ ।’
हाइल्याण्ड विन्सलाई ब्राण्ड बनाएर अघि बढेका उनीहरुले १३ लाख रुपैंयामा व्यवसाय सुरु गरेका थिए । गौशला आउटलेटको स्थापनापछि अर्का साथी कुशल गिरी पनि उनीहरुको सहयात्री बने । ‘अहिले चार करोड दिन्छु भन्नेहरु भेटेको छु । हाइल्याण्ड हाम्रो सपना हो, आठ करोड दिएपनि बेच्दैनौं । किनकी सपना अमुल्य हुन्छ, अर्जुनले जंगीदै सुनाए । अर्कोतर्फ दुर्गा भन्छन्,‘हाम्रो सपना पैसा कमाउने मात्र होइन मान्छे कमाउने पनि हो । मान्छे कमाईयो भने पैसा आफैं प्रशस्त आउँछ ।’
कफीको टेस्टमा उनीहरु बढी संवेदनशील देखिन्छन् । एकचोटी हाम्रो कफी टेस्ट गर्नेलाई हाइल्याण्ड विन्सको आउट खोज्दै आउने बनाउन उनीहरु कटिबद्ध छन् । फलस्वरुप हाइल्याण्डको लोकप्रियतासँगै अर्जुन र दुर्गाको सन्तुष्टि पनि बढ्दो छ । यद्यपि 'क्रप टु कप' को नारासहित हाइल्याण्ड विन्स कफिको स्वादलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म फैलाउन यी युवा दिन रात खटिरहेका छन् ।
मागेको पैसाले समाजसेवा
मम्मी आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् है
मान्छेले त सुख दिएनन्, बाँदरको के कुरा ?
भद्रगोल, सर्वाधिक रुचाईएको हास्य टेलिसिरियल । हासो र मनोरञ्जनमा देखिन्छ, अब्बल । दर्शकको मन जित्न प्रत्येक पात्र छन्, सफल ।